December 2021 - Achawlaymyar
နှစ်သစ်မှာ မီးစပြတ်ပါပြီ (ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန် ၁၂ မြို့နယ် နေ့တဝက် မီးပြတ်မည်)
December 31, 2021 by Achawlaymyar
၂၀၂၂ နှစ်သစ်ကိုတော့ မီးပြတ်ခြင်းနဲ့ စတင်ကြိုဆိုလိုက်ပါပြီ။ လာမယ့် နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်နေ့တွေမှာ ရန်ကုန် ၁၂ မြို့နယ် နေ့တဝက် မီးပြတ်မယ့် အကြောင်းကို ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး ကော်ပိုရေးရှင်းက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ကြေညာချက် အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် ဟုံဟိုင်းဓာတ်အားခွဲရုံတို့အား ချိတ်ဆက် ဓာတ်အား ပို့လွှတ်လျက်ရှိသော 66/33kV,30MVA ထရန်စဖော်မာ (၂)လုံးအား 66/33kV,50MVA ထရန်စဖော်မာ (၂)လုံးဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် (၁၁:၀၀)နာရီ မှ (၁၃:၀၀)နာရီ အထိလည်းကောင်း၊(၂.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ( ၁၁:၀၀ )နာရီ မှ ( ၁၃:၀၀ )နာရီ အထိလည်းကောင်း၊ အလုံဓာတ်အားခွဲရုံ 230/66/11kV, 155 MVA ထရန်စဖော်မာအား ယာယီဓာတ်အားပိတ်၍ … Read more
တိရစ္ဆာန်တွေပေါ် ကြင်နာတရားထားတတ်ဖို့ဆိုတာ အသက်အရွယ်မရွေး၊ လူတန်းစားမရွေးရှိသင့်တဲ့ စိတ်ထားပါပဲ။ ကလေးတွေကို တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် ကြင်နာတတ်ဖို့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သင်ကြားပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း တိရစ္ဆာန်တွေ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေမြင်တွေ့ရတာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းနီးပါး တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ်ကြင်နာတရားမထားတတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့တလေလောက်ပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ကယ်တင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိနေတဲ့အပြင် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ကယ်တင်ပေးနေတဲ့ အကြင်နာတရားထားတတ်တဲ့ လူကြီး၊ လူငယ်တွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ photo credit photo credit မကြာသေးခင်ကလည်း မလေးရှားနိုင်ငံက ကလေးလေးတစ်ဦးဟာ ရေမြောင်းထဲရောက်နေတဲ့ ကြောင်ပေါက်လေးကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် တိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းက ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမည်မသိကလေးလေးဟာ ကြောင်ပေါက်လေးကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းထားတဲ့ ရေမြောင်းထဲကို ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်ပေါက်လေးကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကလေးလေးရဲ့အတုယူလောက်စရာလုပ်ရပ်ကို ပြဖို့အတွက် The Malaysia Animal Association … Read more
ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အတြက္ Google သုံးနည္း လမ္းၫႊန္
အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အတြက္ Google သုံးနည္း လမ္းၫႊန္ Google သုံးတတ္ရင္ ေတာ္႐ုံကေတာ့ ေအးေဆးပဲေနာ္….. ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦး ျပည္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Google သည္ မရွိမျဖစ္ အရာတစ္ခုဟုသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ကို ေသခ်ာစြာ သိရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ မိမိရွာေဖြလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာရွာေဖြျခင္း၊ သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာ မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္လည္း ႀကဳံေနရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္ အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ Google အသုံးျပဳနည္း လမ္းၫႊန္အေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။ … Read more
အလႉ မဂ္ေဆာင္ပြဲ လုပ္ရင္ အခြန္သေဘာမ်ိဳး ပိုက္ဆံ၃သိန္း ေပးရေတာ့မည္
အလႉ မဂ္ေဆာင္ပြဲ လုပ္ရင္ အခြန္သေဘာမ်ိဳး ပိုက္ဆံ၃သိန္း ေပးရေတာ့မည္ မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ ႀကီး တို႔ ေရေနာက္ႏွစ္ မဂၤလာေဆာင္ရင္ ေငြသုံးသိန္းေတာင္းခံမယ့္ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာေၾကာင့္ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ႏွစ္မကုန္ခင္ မဂၤလာေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ေဆာင္ေနၾက လာမည့္ ႏွစ္ မွစ၍ အလႉ၊ မဂၤလာေဆာ င္ျပဳ လုပ္ လွ်င္ စကစ က ေငြက်ပ္ သုံးသိန္း ေတာင္းခံမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသျဖင့္ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ႏွစ္မကုန္မီ အလႉ၊မဂၤလာေဆာင္မ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ျပဳလုပ္ေန လာမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ အလႉမဂၤ လာေဆာင္မ်ားျပဳလုပ္ပါကေငြက်ပ္ သုံးသိန္းေတာင္းခံမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတိုင္း၊ဟသၤာတခ႐ိုင္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ႏွစ္မကုန္မီအလႉ၊ မဂၤလာေဆာင္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံက သိရသည္။ အဆိုပါသတင္းမ်ားသည္ယခုလဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းျခင္းျဖစ္ၿပီးအဆိုပါ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္းက်င္းပရန္လ်ာထားသည့္ အလႉ၊မဂၤ လာေဆာင္မ်ားကိုပါ ယခုႏွစ္မကုန္မီ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း၍ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း … Read more
ဗိုလအြောငဒြငဆြိုတာ တဈခွိနကြ မှနမြာနိုငငြံမှာ အငမြတနနြာမညကြှီးခဲ့တဲ့ အသံဇာတလြမြးဖှဈပါတယြ။ အခစွြ၊ အကှမြးအရမြး နဲ့ လူ့လောကသရုပကြို ဖောကြှူးထားတဲ့ဇာတလြမြးတဈပုဒဖြှဈပီး ကောလိပကြငွနြဝငြေးက ဗိုလအြောငဒြငအြဖှဈ အသံသှငြးထားတာဖှဈပါတယြ။ ကောလိပဂြငွနြဝငြေးရဲ့ အငမြတနအြသရုပပြါ သှဇာပှည့တြဲ့ အသံသရုပဆြောငမြှု့ကှောင့ြ ဒီနေ့ထိတိုငမြရိုးနိုငတြဲ့ ဇာတလြမြးတဈပုဒဖြှဈပါတယြ။အခုအခါမှာတော့ ရှာတဈရှာက ပှဲတဈခုမှာ လူငယတြှေ ဗိုလအြောငဒြငပြှဇာတကြို သရုပဆြောငပြီး ဖွောဖြှနကှေတောဖှဈပါတယြ။ကှည့ပြီး အရမြးရီနရပေါတယြ။ ပရိတသြတကြှီးလညြး ဒီဗှီယိုဖိုငလြေးကိုကှည့ပြီး ဘဝအမောတှပှပွေေောကကြှပါစဗွော။ မငြးသားမငြးသမီးတှမဟေုတဘြဲ ရပထြဲရှာထဲ အပွောသြကသြကြ ဝါသနာအရသရုပဆြောငကြှတာဖှဈလို့ လိုအပခြကွြ အားနညြးခကွြ အမှားတှပေါရငလြညြး ဟာသအမှငလြေးနဲ့ သညြးခံပီးကှည့ကြှပါလို့ တောငြးပနပြါတယနြောြ။ Credit to Original Zawgyi ဗိုလ်အောင်ဒင်ဆိုတာ တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အသံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်၊ အကြမ်းအရမ်း နဲ့ လူ့လောကသရုပ်ကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပီး ကောလိပ်ကျင်နေဝင်းက ဗိုလ်အောင်ဒင်အဖြစ် … Read more
ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့မိခင် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအကြောင်းစုံ အနုပညာလောကထဲမှာ ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ခိုင်မာစွာ ရယူထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်. သူမကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို သိပ်မလုပ်တော့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်သွယ်မပြတ်အောင်တော့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်.. သရုပ်ဆောင် ဖူးပွင့်သခင်ဟာ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်က သူမရဲ့နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံးကို စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက်ယူဆောင်သွားခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ဖူးပွင့်သခင်တစ်ယောက်အတော်လေးကို စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခက်ကပဲ တရားခံတွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းများအားလုံး ခိုးသွားခဲ့တဲ့အပြင် ရစရာမရှိအောင် ပြောဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်ဆိုးကို ဖူးပွင့်သခင်နဲ့မိခင်က ဗီဒီယိုတင်ပြီး ပြောပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. Fans Myay Ni Lan ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့မိခင်ပြောပြချက်ကို နားထောင်ပြီး အားပေးစကားလေး … Read more
ေတာ္လွန္ေရးတကယ္ ေအာင္ျမင္ ခ်င္ရင္ လုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြကို ေျပာျပလာတဲ့ ဦးေက်ာ္သက္လင္း
ေတာ္လွန္ေရးတကယ္ ေအာင္ျမင္ ခ်င္ရင္ လုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြကို ေျပာျပလာတဲ့ ဦးေက်ာ္သက္လင္း မဂ္လာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ေတာ္လွန္ေရးတကယ္ ေအာင္ျမင္ ခ်င္ရင္ လုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြကို ေျပာျပလာတဲ့ ဦးေက်ာ္သက္လင္း “၂မိနစ္စာ————-တ ကယ္ က က်ေနာ္စာေတြအမ်ားႀကီးမေရးခ်င္ေတာ့ပါ။ေရးသင့္တယ္လို႔ယူဆမိတာမို႔ေရးရတာပါ။အခုလိုကာလေတြမွာ အင္အားနည္းတဲ့က်ေနာ္တို႔အားလုံးအတြက္ အကူအညီေတြလိုပါတယ္။ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ မိမိနဲ႔alliance ျဖစ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ျဖစ္ေစ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ကူညီေပးဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကာ လ ဒီလို အေျခ အေန မွာ စီးပြားေရးလည္းလုပ္လို႔မရ ေငြေၾကးနဲ႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြလည္းဘာမွမရွိေတာ့တဲ့အခါအႏၲရာယ္မ်ားစြာထဲက ရေအာင္ကူညီခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံးၿပီးႀကိဳးစားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုအျပစ္ရွာေထာက္ျပကာလမ္းလြဲေနၾကတာျမင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ေျပာခ်င္တာက ဆြဲမခ်ပါနဲ႔ ေဖးကူေပးပါ။တြန္းတင္ေပးပါ။တြဲကူေပးပါ။နာမည္ေလးႀကီးလာတာနဲ႔ ေရွ႕ကိုမတိုက္ပဲ အခ်င္းခ်င္းျပန္ခ်ေန ေဆာ္ေနၾကတဲ့postေတြ ေတြ႕ေနရတာမ်ားလာလို႔ပါ။ နာမည္ႀကီးတဲ့သူေတြကလည္း နည္းနည္းေလးေဝဖန္ခံရတာနဲ႔ ကက္ကက္လန္ျပန္ရန္ေတြ႕တဲ့ဉာဏ္နည္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြေရွာင္ေပးပါ။ေရွ႕ဆက္ၾကပါ။ျပည္သူေတြက ေလးစားၿပီးသား ခ်စ္ၿပီးသားပါ။ အမ်ားအက်ိဳး ႐ြက္သယ္ပိုးကခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း … Read more
ပရိသတ်ကြီးရေ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဟာသလူရွှင်တော် ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချော လေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖခင်ကြီးရဲ့ အနုပညာအမွေကိုဆက်ခံနေတဲ့မျိုးဆက်သစ်အနုပညာရှင်တစ် ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် “သဲ” က အသက် (၂၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဲရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်ကိုတော့ အမလိုချစ်ခင်ရတဲ့ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်က သဲငယ်စဉ်ကပုံလေးနဲ့အတူ “Happy Birthday ချစ်ညီမလေး Thazin Htoo Myint မျက်စိရှေ့ ကနေ့ တဖြေးဖြေး ကြီးလာလိုက်တာ ထက်မြက်တဲ့ လိမ်မာတဲ့ မိဘအပေါ် သိတက်တဲ့ မိသားစုကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ သမီးလိမ္မာလေး အဖြစ်မြင်လာခဲ့ရပြီ။ ဒီအဖေ ဒီအမေ … Read more
မွေးရပ်မြေက ရှင်အပါင်း (၁၀၀၀) အတွက် ထမင်းရည်ချောင်းစီး မောင်းတီးပြီး အလှူပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်နဲ့ သားဂန်း
သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်ကတော့ သူမသိပ်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေး သားဂန်းနဲ့ လက်ထပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သားဂန်းနဲ့ ဘေဘီမောင်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိပေမယ့် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ မေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံပြီး ရှေ့ဆက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တူကိုယ်တူရှိသလို အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာလှူဒါန်းတဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံက ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မွေးရပ်မြေက ရှင်အပါင်း (၁၀၀၀) အတွက် ထမင်းရည်ချောင်းစီးမောင်းတီးပြီး အလှူပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။ “နွားဦးတိုက် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မုတ်ဆိတ်ကွင်းကျေးရွာ၊ မွေးရပ်မြေမြတ် ကျေးဇူးဆပ် ရှင်အပါး ၁၀၀၀ အလှူတော် မဂ်လာကြီးရဲ့ ထမင်းရည်ချောင်းစီးမောင်းတီး ၉ ပေအမြင့် မောင်းကြီးတီးလှူတဲ့ အလှူကြီးနှင့် ဘုရား စိန်ဖူးတော်တင် …ပီတိဖြစ် ဝမ်းမြှောက်ရပါတယ် ဘုန်းဘုန်းဘုရား🙏 မုတ်ဆိတ်ကွင်းကျေးရွာ ကိုသားဂန်းမွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်းဌာပနာထည့်သွင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဘုရား🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹ဆရာတော်ဘုရားလည်းကျန်းမာသက်ရှည်ပါစေဘုရား🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹” ဆိုပြီး ဘေဘီမောင်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။ ဘေဘီမောင်နဲ့ သားဂန်းကတော့ မုတ်ဆိတ်ကွင်းကျေးရွာက မွေးရပ်မြေက … Read more
ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး နီးပါး ဖြစ်သွားတာပါ……seemore
ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး နီးပါး ဖြစ်သွားတာပါ……seemore ဒီနေ့တစ်မနက်ထဲနဲ့တင် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတဲ့ ရ က် စ က်တယ် ရန်ကုန်၊ ရွှေပြည်သာ၊ သာကေတ၊ သမိုင်းလမ်းဆုံ၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တို့တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဗ ုံ းများပေါ က် ကွဲပြီး တာမွေအနီး CCTV BOX မီးရှို့ခံရကြောင်း ဒေသခံများက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ တာမွေဈေးအနီးက CCTV BOXကို ယနေ့ နံနက်အစောင်ပိုင်းတွင်ာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း YPDF-Bahanနှင့် Anonymous Force ပူးပေါင်းက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အလားတူ ရန်ကုန်တိုင်းရွေပြည်သာမြို့နယ် မော်တော်ပီကေအထိုင်ရုံး အတွင်း ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် … Read more